Home News Wasaradda Maaliyadda Dowladda F oo isku badashay qasnad laga masruufo shaqasiyaad ehel...
Wasaradda Maaliyadda Dowladda F oo isku badashay qasnad laga masruufo shaqasiyaad ehel la ah Wasiir Beyle (Cadeymo iyo Sawiro)
Wasiirka Maaliyadda Dowladda Fedaraakal Cabdirahman Beyle ayaa in mudo ah ku faanayey in uu musuq ka dhaamaday dowladda isla markaana Dowladda Fedaraalka ku guuleysatay in ay dhaqaalaha dowladda soo galo uu kordhay. Hadaba waxaa maalinba maalinta ka danbeeysa isa soo tareeysa ceebaha musuqa ee uu lugaha kula Wasiir Beyle. Wasaaradda Maaliyadda ayaa isku rogtay qasnad uu Wasiirk Beyle ka masruufo saaxibadiisa iyo qaar ka mida eheladiisa.
Waxa magaca Wasaaradda Maaliyadda lagu shaqaaleysiiyay shaqsiyaad kuwaas oo ku qaato musharaad isla markaana dowladda ka bixiso lacago badaan oo lagu sheego in ay ku baxayaan deegaanada ay ku noolyihiin iyo amnigoodaba (Hotels and Security).
Sida ku cad waraaqaha ku lifaaqan qormadaan, waxaa jira shaqsiyaad mushaaro kala duwan ka qaata dhowr hay’adood taas oo uu bixiyay ogolashaheeda Wasiirka Maaliyadda Cabdirahman Beyle.
Wasiir Bayle ayaa sadax nin oo ay ehel yihiin ka shaqaaleysiiyay Wasaaradda Maaliyadda. Sadexdaan shaqsi oo la kala yiraahdo Liiban Obsiye, Mr Nuur Cali Cumar iyo Mr Abdullahi Hussein Nur ayaa waxa mushaar ay ka qaataan Wasaradda Maaliyadda iyaga oo sidoo kale lacag kale ka qaata African Development Bank oo ah hay’ad ay dowladda Soomaaliya ka codsaday in ay ka kaalmeeyso mashaariic iyo barnaamijyo.
Iyada oo la ogyahay in sadaxdaas shaqsi ay mushaaras joog ah ka qaadataan Wasaaradda Maaliyadda iyo ADB ayaa hadana waxaa Wasiir Beyle uu amar ku bixyay in sadaxdaan qof Wasaaraddu ku bixiso lacago qaansheegasho ah oo ka kooban lacago ku baxaya hoteelo, gunooyin qarashaad safaro been abuur ah, gawaari la kireysaty iyo waliba ciidan amni oo ayaga ilaaliya. Inta badan qaansheegashada waa been abuur la doonayo in lagu dhaco lacagta umadda.
Talabadan guracan ee uu Wasiir Beyle ku dhaqaaqay ayaa waxay ay burineysaa balantii uu MW Farmaajo ka qaaday shacabka Soomaaliyeed. lunsiga hantida shacabka waxaa tusaale cad u ah qoraalada ka soo baxa Wasaaradda. Sida aan ku aragataan qoraalada la socda qormadaan waxaa jira warqad uu ku saxiixan yahay Agaasimaha Guud ee W/Maaliyada Mr Shire Axmed Jimcaale laakiin uusan ku saxiixneynin Xisaabiyaha Guud ee Dawlada Federaalka Soomaaliya Marwo Faadumo Cismaan Faarax.
Halkan ka aqriso Waraaqaha idiin muujinaya musuq-maasuqa dowladda Farmaajo:
Liiban Obsiye shaqaale Wasaarada Maaliyada qarashaadka ku baxa iyo jiifka Hotelkiisa
Nuur Cali Cumar shaqaale Wasaarada Maaliyada sifada shaqo (Communications And Reporting Consultant). Qarashaadka ku baxa iyo jiifka Hotelkiisa
Previous articleXildhibaanadda Hirshabeelle oo ku Goodiyay in ay Mooshinka Dib u Bilaabayaan Hadii Waare uusan Hakin Damaciisha Villa Soomaaliya
Next articleSafiirka Soomaaliya ee Turkiga u fadhiya oo looga yeeray wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga (Sababta)
Xildhibaanadda Baarlamaanka Maamulka Galmudug oo dhexdooda iskhilaafsan!!
Al-shabaab oo soo bandhigay haraadiga burburka Diyaarad Mareykanku leeyahay